Luthini uhlalutyo lweqela likaGoogle loHlalutyo? Isikhokelo sakho esineenkcukacha | Martech Zone
NgoLwesibini, Meyi 5, 2015 NgoMvulo, Meyi 4, 2015 Shane Barker
UGoogle Analytics kutsha nje wongeze into entle yokuhlaziya isiphumo sokulibaziseka kwabakhenkethi bakho abaziwa njengohlalutyo lweqela, eluhlobo lwe-beta yomhla wokufumana kuphela. Ngaphambi kolu kongezwa kutsha, ii-webmasters kunye nabahlalutyi abakwi-Intanethi ngekhe bakwazi ukujonga impendulo elityazisiweyo yeendwendwe zewebhusayithi zabo. Kwakunzima kakhulu ukumisela ukuba ngaba abatyeleli be-X bandwendwele indawo yakho ngoMvulo emva koko bangaphi kubo abatyelelayo ngosuku olulandelayo okanye ngosuku olulandelayo. Entsha kaGoogle Uhlalutyo lweqela Isici siya kukunceda ufumane kwaye uhlalutye le datha ukwandisa ukubandakanyeka kwewebhusayithi yakho.
Yintoni i "Cohort"?
Iqela labantu ligama elisetyenziselwa ukuchaza iqela labantu abadityanisiweyo ngenxa yempawu efanayo. UGoogle usebenzise igama "iqela" ukuchaza isiphumo sokulibaziseka kubahlalutyi kwaye wenze olunye uhlobo lwesahlulo esivavanywe ixesha lokuhlalutya indlela yokuziphatha komsebenzisi. Ngaphambi kokuba inqaku lidityaniswe kuGoogle Analytics, kwakunzima kakhulu ukuhlalutya ii-cohorts njengokufumana komhla, kodwa ngoku kunokuvunyelwa ukusebenzisa izinto eziguquguqukayo zesiko kunye neziganeko.
Ulusebenzisa njani uhlalutyo lweqela
Unokufikelela ngokulula kwicandelo lohlalutyo phantsi kwecandelo labaphulaphuli elinikezelwe ngakwicala lakho lasekhohlo kwiGoogle Analytics. Nje ukuba ucofe, uza kubona igrafu elandelwa yitafile. Ngelixa itafile kunokuba nzima ukuyiqonda ekuqaleni, ungakhathazeki kuba ndiza kwenza kube lula ukuyiqonda. Igrafu emiselweyo ibonisa umyinge wokugcina (%) weendwendwe zakho ezizodwa kwezi zisixhenxe zidlulileyo, 14, 21, okanye iintsuku ezingama-30 ezidlulileyo.
Kule theyibhile ingezantsi, uza kubona ukuba ngo-Epreli 1, 2015 (kumqolo wesithathu), ngabasebenzisi abangaqhelekanga abali-174 abatyelele iwebhusayithi, eza kuthi isetyenziselwe ukumela usuku 0. Ngoku jonga usuku 1 kwikholamu yesithathu ukubona ukuba zingaphi iindwendwe ezili-174 zandwendwela iwebhusayithi kamva. Nge-2 ka-Epreli 2015, i-9.2% ibuyile kwaye kuphela yi-4.02% ityelelwe ngo-Epreli 3, 2015. Ungajonga into efanayo kumqolo wesine ukufumana ukuba zingaphi iindwendwe ezili-160 ezizodwa ezihambele iwebhusayithi yakho ngo-Epreli 3, Epreli 4, Epreli 5 , kwaye nangokunjalo.
Umndilili weentsuku ezisixhenxe zizonke iindwendwe eziyi-1,124 zinokubonwa kumqolo wokuqala, omelwe kwigrafu ephezulu.
Kude kube ngoku, ndilubonile olu hlalutyo lwenziwa kwiiwebhusayithi ezininzi. Ndigqibile ukuba iiwebhusayithi ezingasebenzi kakuhle kwizikhundla zeinjini yokukhangela okanye nasiphi na esinye isitya esikhethekileyo sokwenza ukugcwala kwabantu banamazinga asezantsi kakhulu okugcina. Iiwebhusayithi ezixabisa uphawu lwentengiso kwaye zitsala ukugcwala kwabantu ngokugcwala. Kuyathemba ukuba ngoku ungahlalutya inqanaba lokugcina iwebhusayithi yakho. Kodwa, umbuzo olandelayo kukuba loluphi uhlalutyo olunokusetyenziswa? Impendulo kukuba isetyenziselwa kakhulu ukuhlalutya iiwebhusayithi kunye nokusetyenziswa kweselfowuni.
Uhlalutyo lweQela kwiZicelo zeMfono
Ngenxa yokuba ipesenti ephezulu yabemi ngoku isebenzisa i-smartphone okanye ithebhulethi ukukhangela i-Intanethi, usetyenziso lweselfowuni luyanda kule mihla. Oko kwenza ukuhlalutya indlela yokuziphatha komsebenzisi kwezicelo eziphathwayo kubaluleke kakhulu ukuqhubeka nokukhula. Ukuba uyazibuza ukuba basebenzisana ixesha elingakanani ne-app yakho yeselfowuni, bangaphi abasebenzisi abavula i-app ngemini, okanye ukuba ubandakanyeka njani kwi-app, unokufumana zonke iimpendulo zakho ngokwenza uhlalutyo. Emva koko, uya kuba nolwazi lokwenza izicwangciso eziphambili zokuphucula ubukho benkampani yakho.
Ngokunjalo, nangaliphi na ixesha usenza uhlaziyo kwisicelo sakho esiphathwayo, uya kuba nakho ukubona ngokubonakalayo iziphumo zophuculo. Ukuba izinga lokugcina kwakho liyehla, oko kubonisa ukuba ungaphoswa yinto kwaye abasebenzisi abazithandi iziphumo zokugqibela. Ungasebenzisa ukuqonda kwakho kwindlela yokuziphatha komsebenzisi ukwenza uhlaziyo olulandelayo lube ngcono. Naluphi na utshintsho kwindlela yokuziphatha yomsebenzisi yesicelo kunokulandelwa ngokulula kwaye kuncitshiswe ukuhambisa imizamo yakho elandelayo kukuzibandakanya ngakumbi.
Apha ngezantsi ngumzekelo wohlalutyo lweqela eliqhutywa kwisicelo esiphathwayo kunye nabasebenzisi beveki abangama-8,908. Njengoko ubona, i-avareji yenqanaba lokugcina yayiyi-32.35% ngosuku lwe-1, olucutha imihla ngemihla. Ngale datha, kuya kufuneka uqale ugxile kwindlela yokugcina abasebenzisi bebandakanyeka nesicelo ukuze izinga lokugcina lonyuke kunye nabasebenzisi abaninzi abavula usetyenziso mihla le. Nje ukuba iphakame, kuya kubakho utshintsho oluphezulu lokufumana iindwendwe ezintsha ngenxa ukwazisa ngomlomo.
Ukuqwalaselwa kweNgxelo yoHlolo lweCohort
Xa uvula uGoogle Analytics ukwenza uhlalutyo lwakho, uyakufumanisa ukuba ingxelo inokuqwalaselwa ngokusekwe kudidi lweqela, ubungakanani beqela, imitha, kunye noluhlu lomhla.
Uhlobo lweQela Okwangoku, uguqulelo lwe-beta lukuvumela kuphela ukuba ufikelele kumhla wokufunyanwa, kungoko unokubona indlela yokuziphatha kwabasebenzisi abatyelele indawo ngomhla othile kunye nendlela abaziphathe ngayo ixesha elithile.
Ubungakanani beqela -Oku kubhekisa kutshintsho lobungakanani bee-cohorts ngeentsuku, iiveki, okanye iinyanga. Ukuqwalasela ingxelo yakho ngokusekwe kubungakanani beqela kunokukunceda ufumane ukuba zingaphi iindwendwe ezityeleleyo ngoJanuwari kwaye zabuya ngenyanga kaFebruwari. Xa ukhetha ubungakanani beqela, unokukhetha uluhlu lweentsuku ezisixhenxe, ezili-14, ezingama-21, okanye ezingama-30 ngelixa ukhetha ubungakanani beeveki.
Metric -Yile nto inye kuphela ofuna ukuyilinganisa. Okwangoku, iimetriki zinokubandakanya ukuguqulwa komsebenzisi ngamnye, ukujonga iphepha ngondwendwe ngalunye, iiseshoni ngondwendwe ngalunye, ukujonga ii-app ngomthengi ngamnye, ukugcinwa komsebenzisi, ukugqitywa kweenjongo, ukuguqulwa, njl njl.
Uluhlu lomhla -Ngale nto, unokuluhluka uluhlu lomhla ukusuka kwiintsuku, iiveki, kunye neenyanga kuxhomekeke kubungakanani beqela lakho.
Kwakhona kunokwenzeka ukuba usebenze uhlalutyo kumacandelo ahlukeneyo. Umzekelo, unokujonga ixesha leseshoni eliphakathi labatyeleli kwisixhobo esiphathwayo xa kuthelekiswa neendwendwe ezisebenzisa ikhompyuter yedesktop. Okanye, unokumisela ingxelo ngokubhekisele ekufumanekeni kwabatyeleli kwiveki ethile, njengeveki engaphambi kweKrisimesi ka-2014. Ukwenza oku kungabonisa ukuba abatyeleli bewebhusayithi yakho bachitha ixesha elininzi kwisayithi besebenzisa ikhompyuter ye-desktop, ngakumbi ngaphambi kweKrisimesi.
Sukutyhafa ukuba uhlalutyo lwecohort kunzima ukuluqonda okokuqala kuba uza kubamba nexesha. Yeyona nto iluncedo ekuvumela ukuba uhlalutye impendulo ebambezelekileyo yabasebenzisi ngokuthe ngqo ngesixhobo sakho seGoogle Analytics. Ukuncitshiswa kwale datha iyinyani kunokukunceda wenze uphuculo olutsha lokuzibandakanya kwiwebhusayithi yakho kunye / okanye usetyenziso lweselfowuni lokuguqula ngcono.
tags: UhlalutyocohortUhlalutyo lweqelai-google analyticsUhlalutyo lweqela le-google analyticsyintoni uhlalutyo lweqela
Shane Barker ngumcebisi wentengiso yedijithali kwiminyaka eyi-15 egxininisa kwiNtengiso ye-Influencer kule minyaka mi-5 idlulileyo. Ukhethekile kwimingxunya yokuthengisa, ekugxilwe kuyo kwezithuthi kunye nokuguqulwa kwewebhusayithi. Uthethathethane neenkampani zeFortune 500, abachaphazeli ngeemveliso zedijithali, kunye nenani labantu abadumileyo ku-A.
Meyi 15, 2015 kwi-5: 58 AM
Umzekelo ubonakalisile kule nto yeselfowuni. Yeyiphi iapp?
Nguyen Nguyen (@NguyenNguyen)
Jul 23, 2015 ngo-4: 49 AM
Enkosi kakhulu kuShane ngexesha lakho lokusichazela ngoHlolo oluHlanganisiweyo. Ibifundwa kamnandi ngenene! Sifumene ii-imeyile ezimbalwa zibuza malunga neQela kodwa ngoku singabanika ikhonkco lakho 😉
Meyi 13, 2016 kwi-1: 18 AM